SARUDZA MUTAURO Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur Amharic Amis Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiMin Nan (ChekuTaiwan) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTamil (Chinonyorwa Nearufabheti Yedu) ChiTetun Dili Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Edo Efik Esan Estonian Ewe Fante Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Gitonga Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guianese Creole Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kituba Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Lari Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Mapudungun Marathi Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuNigeria Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Niuean Norwegian Nsenga (Zambia) Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Songomeno Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Taabwa Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tewe Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
UNONZWA sei kana ukagamuchira tsamba inokurudzira inobva kushamwari yako? Mudzidzi wechiKristu Timoti akagamuchira tsamba yakadaro kubva kumuapostora Pauro, iyo yatava kuziva sebhuku reBhaibheri ra2 Timoti. Timoti anofanira kunge akatsvaga nzvimbo yakanyarara kuitira kuti averenge zvaiva mutsamba iyi yainge yabva kushamwari yake. Zvimwe Timoti aifunga kuti: ‘Pauro wacho ari sei? Kuti angadaro aine zvaari kundiudza zvingandibatsira pabasa rangu? Tsamba iyi ingandibatsira here kuti ndibudirire muushumiri hwangu uye pakubatsira vamwe?’ Sezvatichaona, Timoti akawana mhinduro dzemibvunzo iyi nemimwewo mutsamba iyi inokosha. Munyaya ino tichaona mazano anobatsira ari mutsamba yacho.
‘NDINORAMBA NDICHITSUNGIRIRA ZVINHU ZVESE’
Achingoverenga mashoko ekutanga etsamba yacho, Timoti akabva angoona kuti Pauro aiva nehanya naye. Pauro akamudana kuti “mwana anodiwa.” (2 Tim. 1:2) Kunyange zvazvo Timoti angangodaro aiva nemakore ekuma30 paakagamuchira tsamba iyi munenge muna 65 C.E., akanga atova nenguva ari mukuru. Akanga ashanda naPauro kwemakore anopfuura 10 uye adzidza zvakawanda kwaari.
Timoti anofanira kunge akakurudzirwa chaizvo paakaziva kuti Pauro airamba akatendeka, achitsungirira matambudziko. Pauro akanga ari musungwa kuRoma, ava pedyo nekuurayiwa. (2 Tim. 1:15, 16; 4:6-8) Timoti anofanira kunge akaona ushingi hwemuapostora uyu nekuti Pauro akati: ‘Ndinoramba ndichitsungirira zvinhu zvese.’ (2 Tim. 2:8-13) Tinogona kuwana simba kubva pakutsungirira kwaPauro sezvakaita Timoti.
Pauro akakurudzira Timoti kuti akoshese chaizvo basa raaiitira Mwari. Aida kuti Timoti ‘akuchidzire chipo chaMwari’ chaiva maari. (2 Tim. 1:6) Pauro akashandisa shoko rechiGiriki rekuti khaʹri·sma kureva “chipo.” Shoko racho rinoreva chipo chinopiwa munhu asina kuchishandira kana kuti asina kukodzera kuchiwana. Timoti akawana chipo ichi paakasarudzwa kuti aite basa rinokosha muungano.—1 Tim. 4:14.
Timoti aifanira kuitei nechipo ichi? Paakaverenga shoko rekuti ‘kuchidzira,’ anogona kunge akafunga nezvemoto uyo unogona kupedzisira wava mazimbe. Mazimbe iwayo aifanira kukuchidzirwa kuti aite marimi uye awedzere kupisa. Rimwe duramanzwi rinoti shoko rechiGiriki rakashandiswa naPauro rinoreva “kutangazve, kumutsidzira, kufuridza moto,” zvichireva “kuva nechido uye kushingaira pabasa.” Pauro aikurudzira Timoti kuti: ‘Isa mwoyo wako pabasa rako!’ Mazuva ano tinofanirawo kushingaira pabasa redu.
“CHENGETEDZA ZVAWAKACHENGETESWA IZVI”
Paaidzika netsamba iyi yakabva kushamwari yake, Timoti akawana mamwe mashoko aizomubatsira kuti abudirire muushumiri hwake. Pauro akanyora kuti: “Chengetedza zvawakachengeteswa izvi uchibatsirwa nemweya mutsvene, uyo uri kugara matiri.” (2 Tim. 1:14) Timoti akanga achengeteswa chii? Muvhesi 13, Pauro akanga ataura ‘nezvemashoko anobatsira,’ kureva chokwadi chinowanikwa muMagwaro. (2 Tim. 1:13) Sezvo aiva mushumiri wechiKristu, Timoti aifanira kuparidza chokwadi ichi muungano uye mundima. (2 Tim. 4:1-5) Uyewo Timoti akanga agadzwa semukuru kuti afudze makwai aMwari. (1 Pet. 5:2) Kuti akwanise kuchengetedza zvaakachengeteswa, icho chokwadi chaaidzidzisa, Timoti aifanira kuvimba nemweya mutsvene waJehovha uye Shoko rake.—2 Tim. 3:14-17.
Mazuva ano isuwo takachengeteswa chokwadi chatinodzidzisa vamwe muushumiri. (Mat. 28:19, 20) Kana tikaramba tichinyengetera uye kugara tichidzidza Shoko raMwari tinenge tichiratidza kuti tinokoshesa chokwadi chatinodzidzisa. (VaR. 12:11, 12; 1 Tim. 4:13, 15, 16) Tinogonawo kunge tichishumira semukuru muungano kana kuti tiri mubasa renguva yakazara. Mabasa akaita seaya anofanira kuita kuti tizvininipise, tione kuti tinoda kubatsirwa naMwari. Saka tinogona kuchengetedza zvinhu izvi kana tikazvikoshesa uye tikavimba naJehovha kuti atibatsire kuita mabasa acho.
“ZVINHU IZVI ZVIPE VANHU VAKATENDEKA”
Mabasa akapiwa Timoti aisangova ake ega. Aifanirawo kudzidzisa vamwe. Ndosaka Pauro akamuudza kuti: “Zvinhu zvawakanzwa kwandiri . . , zvipe vanhu vakatendeka, avo vachanyatsokwanisawo kudzidzisa vamwe.” (2 Tim. 2:2) Saka Timoti aifanira kudzidzisa dzimwe hama zvinhu zvese zvaakanga adzidza. Zvinokosha kuti mutariri wese ari muungano aedzewo kuita izvozvo. Mutariri ane rudo haavanziri vamwe zvaanoziva nezvemaitirwo ebasa. Asi anovadzidzisawo kuti vakwanise kuita basa racho. Haatyiri kuti vangamupfuura pakuva neruzivo kana pakugona basa. Saka mutariri haadzidzisi munhu basa achisiyira panzira. Anoda kubatsira vaya vaari kudzidzisa kuti vave nenjere, kureva kuti vakure pakunamata. Kana akadaro, “vanhu vakatendeka” vaanenge adzidzisa vachabatsira ungano chaizvo.
Zviri pachena kuti Timoti akakoshesa tsamba inokurudzira yaakanyorerwa naPauro. Tinogona kufungidzira achidzokorora kuverenga mazano anokosha arimo uye achifungisisa kuti angaashandisa sei mubasa rake.
Tinodawo kushandisa mazano acho. Tingaashandisa sei? Tinogona kushanda nesimba kuti tikuchidzire chipo chatakapiwa, tichengetedze zvatakachengeteswa uye tidzidzise vamwe zvatinoziva. Kana tikadaro, tichakwanisa kuita ‘ushumiri hwedu zvizere’ sezvakataurwa naPauro kuna Timoti.—2 Tim. 4:5.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Isa Mwoyo Wako Pabasa Rako!
w20 December pp. 28-29